SKAL waxay ku kulmeen Turku
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » SKAL waxay ku kulmeen Turku
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Denmark War Deg Deg Ah • Estonia Breaking News • Finland War Cusub • Wararka Latvia • Shirka Warka Warshadaha • Wararka Norway • War Deg Deg Ah Sweden
Skål International Turku waxay martigelinaysaa kulanka Gudiga Aaga Norden ee xubnaha Skål ee ka socda wadamada Baltiga iyo wadamada Nordic dhamaadka usbuuca. Guddiga Aagga Caalamiga ee Skål Norden wuxuu ka kooban yahay naadiyo ka kala socda Danmark, Estonia, Finland, Latvia, Norway iyo Sweden. Shirka waxaa lagu qabtaa sanad kasta labaad waddan qabta Madaxtooyada. Inta lagu guda jiro kulanka Madaxweynaha waxaa laga soo gudbin doonaa Finland oo waxaa loo diri doonaa Danmark.
Kulanku wuxuu bilaabmayaa Jimcaha iyadoo xaflad la isugu yimaado maqaayada Kåren. Dhacdadan - diskoo 80-kii - way u furan tahay dadweynaha. Kulanka rasmiga ah waxaa lagu qabtaa Best Western Hotel Seaport Sabtida. Ajandaha wuxuu ku saabsan yahay warbixinnada Naadiyada, Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee cusub ee Skål International iyo dhacdooyinka mustaqbalka. Shirka Sabtida waxaa xigta qado, booqasho indho indheyn iyo casha sharaf ah oo ka dhacda Jasiiradda Loistokari.
Kaqeybgalka kulanka ayaa tusaale ahaan kuxigeenka sare ee Skål International Ms Susanna Saari(Turku), Madaxweynaha Skål International Helsinki Mr. Stefan Ekholm, Xildhibaanka Caalamiga ah ee Skål Ms Marja Eela-Kaskinen (Turku), Madaxweynaha Skål International Norden Mr. Kari Halonen (Helsinki), iyo laba Madaxweyne oo hore oo Caalamka soo maray, Mr. Jan Sunde iyo Mr. Trygve Södring labaduba waxay ka yimaadeen Norway. Sweden, Danmark iyo Boqortooyada Midowday ayaa sidoo kale ku matalaya kulanka.
Dhamaadka kulanka, astaamaha Madaxtooyada, ee loo yaqaan 'regalia' waxaa loo wareejiyay Madaxweynaha fo Skål International Copenhagen, Arshad Khokhar“, Ayuu sharaxay madaxweynaha xilka kasii degaya Kari Halonen.
Skål International (Ururka Xirfadleyda Dalxiiska iyo Dalxiiska) waxaa lagu aasaasay magaalada Paris sanadkii 1934. Skål waa urur xirfadlayaal ah oo hogaamiyaal dalxiis oo adduunka ah, kobciya dalxiiska adduunka iyo saaxiibtinimada, xoojinta joogtaynta iyo dhiirrigelinta doodda ku saabsan saamaynta deegaanka ee dalxiiska. Maanta, Skål International waxay ka kooban tahay 14 000 xubnood 400 naadi oo ku kala yaal 87 dal. Finland waxay ku jirtay Skål ilaa 1948 iminkana 140 xubnood ayaa ka jooga naadiyada Helsinki iyo Turku. Skål International waxay xubin ka tahay IIPT iyo UNWTO waxayna sidoo kale ku lug leedahay ECPAT iyo The Code. Skål International sidoo kale waxay heshiis is afgarad ah la saxiixatay UNEP. Magaca ururka waxaa loola jeedaa dhaqanka iyo soo dhaweynta Nordic Sk hospitall ee ay ka heleen koox khubaro ah safarka oo ka yimid Paris oo booqday wadamada Nordic 1930-yadii.